Ngaba Ukhulelwe kwiiNgjini zokukhangela Ukukhahlela iSayithi lakho? - Bayeke Nge-Semalt!
Ii-enginesho zokutshintshwa ziguqula izilungiso zazo phantse yonke imihla kwaye ezi tshintsho azihlali zilungele i-webmasters kunye neeblogi. Kukho njalo ithuba lokuba iwebhusayithi yakho iya kuvalwa ngenxa yokuphucula imigaqo-nkqubo ye-injini yokusesha. Ngaphezulu koko, iziphumo zabo zophando ze-geo kunye nokuzikhethela ngabanye ziyakuthi zichaphazeleke - cuantos planos fotograficos existen y para que sirven. Kuhle ukuvimba iiwebhsayithi ezininzi kwiiGoogle, Bing, kunye ne-Yahoo iziphumo zokukhangela ukuze amaphepha akho ewebhu avele kalula. UJason Adler, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , uthi ukubulela, kukho ezinye iindlela zokuvimba iiwebhusayithi ezithile kwiziphumo zophando. Ezinye zazo zixoxwa ngezantsi.
1. I-Personal Website Blocklist:
Ukudala ii-blocklists zakho kwiwebhusayithi yakho kwi-Google Chrome kulula njenge-ABC. Ngenxa yoko, kufuneka ufake isandiso seGoogle; xa sele efakwe, uza kubona ukhetho lokuvimba ii-sites okanye ii-URL ezikuxhaphaza rhoqo kwaye zitshintshe indawo yakho ngasemva kwiziphumo zophando ze-Google. Xa unqakraza ukhetho lweBlock, ezo nbsayithi ziza kubakho ngokukhawuleza kwiziphumo zophando zeGoogle. Kufuneka ukhumbule ukuba ezi ndawo zivela kwiziphumo zophando ze-Yahoo kunye ne-Bing, oku kuthetha ukuba awukwazi ukuwavimba ezivela kwezinye iinjongo zokukhangela usebenzisa le ndlela.
2. Vimba umsinge wamanje kwiinjini zokukhangela ezifana neGoogle.com:
Kulula ukukhusela umkhosi wamanje kwiGoogle..com. Ukuba unesiqendu se-Google Chrome Izicwangciso zakho zivulekile, ungabhawula iiwebhsayithi ezisolisayo okanye ezindala ngokuchofoza inkinobho yeBlockIt. Kwaye ukuba ukhekha kwi-Show option, iifayili ezifanayo ziya kuvela kwimiphumo yakho yophando ye-Google.
Ukuba ufuna ukubona uluhlu lwamasayithi osanda kuvalwa, kufuneka ucofa kwi icon ye-Blocklist kwibar yomthamo. Oku ngokuqhelekileyo kubonakala kumbala we-orange kunye ne icon icon.
Ngaphandle kwezi ndlela zimbini ezingentla apha, i-Webspam Report Report plugin nayo ifanele ukuhamba nayo. Oku kukuvumela ukuba ubike iingosi ezinokukrokra kunye nezikhulile njenge-spam. Enyanisweni, kuyona ndlela elula kwaye ilungileyo njengoko unokubhengeza ezininzi iiwebhu kunye neeblogs ngexesha elinokwenzeka. Ukuba iingxelo zogaxekile zithunyelwa ku-Google, injini yokukhangela iya kugqitywa kwaye ibambe isayithi kwiziphumo zayo.
Ngalolu hlobo, unokubamba zonke iziphumo ezingafunekiyo nezikrokrela kwi-injini ye-Google yokusesha. Ngelishwa, le iplagin ayisebenzi kakuhle nge-Safari nakwezinye iziphequluli zewebhu. Kuthetha ukuba ungayisebenzisa kuphela xa ushonga iiwebhsayithi ngeGoogle Chrome kwaye unesi sikratshi njengesona sikhokelo.
4. Abasebenzisi be-Firefox:
Ukuba ungumsebenzisi we-Firefox, kunokwenzeka ukuba ufake ii-add-on ezifanayo eziya kuvimba zonke iisayithi ezingafunekiyo kwiziphumo zophando. Ngokomzekelo, ukuba unesayithi le-WordPress, unokujonga i-plugin ekunceda ukuvimba iziza ezingafunekiyo kwiziphumo zophando lwe-Firefox. Emva kokufakela ngokupheleleyo, unako ukwenza i-plugin isebenze kwaye uvimbele okanye ususe iiwebhusayithi kunye neeblogi ongazifuni ukubonisa kwiziphumo zakho zophando lwe-Google.
Zonke ezi ndlela zilula ukulandela kunye nokusebenza kuzo zonke iindidi zewebhsayithi, iiblogi kunye namaphepha eendaba ezentlalo.